I-Google Official Analytics Apps ze-iPhone kunye ne-Android | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Julayi 18, 2014 NgoLwesihlanu, Julayi 18, 2014 Douglas Karr
igosa Uhlalutyo lukaGoogle kwi-iPhone kwaye Uhlalutyo lukaGoogle Android Izicelo zeselfowuni zikhutshiwe ukuze ukwazi ukufikelela kuyo yonke idatha yewebhu yeGoogle Analytics kunye nedatha yosetyenziso kwi-iPhone yakho. Insiza iquka neengxelo zexesha langempela.
Uhlelo lokusebenza lwandisa ingxelo yokuHlalwa kukaGoogle kunye nolawulo lwendawo ehambayo, ukuze ufumane olona lwazi lubalaseleyo nokuba usebenzisa siphi isixhobo. Umzekelo, iapps ihlengahlengisa ngokuzenzekelayo isibonisi ukuze ilingane ubungakanani bescreen sakho, kwaye ukuhamba ngokusekwe kukuchukumisa kunye nokuswayipha endaweni yokuthayipha ikhibhodi yesiNtu.
Nantsi eminye imifanekiso:
Umda kuphela kwiiNkqubo kukuseta iakhawunti kunye noseto, njengokudala iipropathi okanye umbono, ukuhlela iiNjongo okanye izihluzo, ukongeza abasebenzisi kunye nokutshintsha iimvume. Ezo mpawu zifuna ukuba ungene kwi-Akhawunti yakho kaGoogle yokuHlola usebenzisa isikhangeli sedesktop.
tags: usetyenziso lwee-analyticsAndroidusetyenziso lwe-androidi-google analyticsUhlalutyo lukaGoogle lwe-androidUhlalutyo lukaGoogle lwephoneiOSusetyenziso lwe-iosiphoneIphone app